အလုပ်ရှင် အလုပ်သမားများ၏ နစ်နာမှုများ ပိုမိုနည်းပါးစေရန် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များကို နိုင်ငံတက? - Yangon Media Group
အလုပ်ရှင် အလုပ်သမားများ၏ နစ်နာမှုများ ပိုမိုနည်းပါးစေရန် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များကို နိုင်ငံတက?
အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားများ၏ နစ်နာမှုများ ပိုမိုနည်းပါးစေရန် ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်း ချက်များကို နိုင်ငံတကာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း စံနှုန်းများဖြင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေက ပြောဆိုခဲ့သည်။
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ILO တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် အလုပ်တွင် ထိခိုက်မှုအကျိုးခံစားခွင့် အာမခံစနစ်နှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာမျှဝေသည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ယခုလ ၃ဝ ရက်မှ ၃၁ရက်အထိ နေပြည်တော် ရှိ M-Gallery ဟိုတယ်တွင် နှစ်ရက်ကြာ ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လဲ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားတွေရဲ့ နစ်နာမှုတွေကို ပိုမို နည်းပါးလာစေဖို့၊ ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကို အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စံနှုန်းနဲ့ ကိုက်ညီစေဖို့အတွက်အပြင် မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနက အလုပ်တွင် ထိခိုက်မှု အကျိုး ခံစားခွင့်နဲ့စပ်လျဉ်းပြီး ဆောင်ရွက်နေတာကို အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းတွေ သာမက ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနတွေကလဲ သိရှိ နားလည်ပြီး တကယ့်မြေပြင်မှာ ပိုမိုထိရောက် မြန်ဆန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့အတွက် ယနေ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ပြုလုပ်ရခြင်း ဖြစ်ပါ တယ်”ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ က ပြောသည်။
ထို့အပြင် ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတွင် ထိခိုက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူမှုဖူလုံရေး ဥပဒေနှင့် အကျုံးဝင်သည့် အာမခံအလုပ်သမားများအတွက် လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ စည်းကြပ်ဆောင်ရွက်နေပြီး လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့် အကျုံးမဝင်သည့် အခြားသောအလုပ် သမားများအတွက် အလုပ်သမားလျော်ကြေးဥပဒေနှင့်အညီ စည်းကြပ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အလုပ်တွင် ထိ ခိုက်မှုဆိုင်ရာ အာမခံစနစ်(Employment Injury Insurance –EII) အစီအစဉ် အပါ အဝင် လူမှုဖူလုံရေး အာမခံစနစ်များ(Social Insurance Scheme) ကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးတိုးတက်မှုရလဒ်များ ပေါ်ထွန်းမည့် အကျိုးကျေးဇူးကို ခံစားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ သည်။
အဆိုပါ EII စနစ်သည် နိုင်ငံပေါင်း ၁၇ဝ ခန့်တွင် ကျင့်သုံးလျက်ရှိပြီး ထိုစနစ်သည် အလုပ်သမားများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် ကာကွယ်ပေးခြင်းအပြင် လုပ်ငန်းခွင် ဆက်ဆံရေးထိန်းသိမ်းပေးရာတွင် အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍအနေဖြင့် ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုစနစ်အား ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ စိန်ခေါ်မှုများ အဖြစ် အာမခံစနစ်အကျုံးဝင်မှု တိုးချဲ့ခြင်း၊ အကျိုးခံစားခွင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ထိခိုက်မှု ကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်၍ ရလဒ်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ရခြင်း စသည်တို့ရှိကြောင်း ပြောဆိုသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအပါအဝင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အစိုးရကိုယ် စားလှယ်များ၊ ILO မှ ဖိတ်ကြားထားသော ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များအပြင်၊ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ၊ အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာအဖွဲ့များ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
တောင်သူများ၏ ဘဝရပ်တည်ချက်ဖြစ်သည့် လယ်ယာမြေများကို ပြန်လည်ပေးအပ်နိုင်ရန် အစိုးရက အထူးတာဝန?
အာဖဂန်နစ္စတန် ကဘူးလ်မြို့ အကျဉ်းထောင်အနီးတွင် အသေခံ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွား၊ ခုနစ်ဦး
စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများ တက်နေသော်လည်း ကလေးမြို့အခြေစိုက် ပြေးဆွဲသည့် ကားအသင်းများ ခရီးသည်
ကမ္ဘောဒီးယား ရိုးရာ ‘ခွန်’ အကကို ယူနက်စကို ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် အဖြစ် စာရင်းသွင်း
ပြိုင်ဘက် အင်တာကို လိုက်မီနိုင်မည်ဟု ဘိုနာဗန်တူရာ ယုံကြည်
အီရတ် ကာကွတ်မြို့အနီး အသေခံဗုံးခွဲ၊ ရဲသားနှစ်ဦး သေဆုံး
ဆိုးလ်ရှားကို အချိန်ပေးစောင့်ကြည့်ရန် ဗန်ပါစီ တိုက်တွန်းပြောဆို